Snapdragon 710 SoC ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပြိုင်ဘက် MediaTek Helio P90 | MyTech Myanmar
Snapdragon 710 SoC ရဲ့ အကောင်းဆုံး ပြိုင်ဘက် MediaTek Helio P90
ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံအခြေစိုက် နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ MediaTek အနေနဲ့ Helio P90 SoC ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ပတ်လောက်တုန်းက တရားဝင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Helio P90 SoC ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် Q1 ( 1 Jan – 31 March) မှာ ထွက်ရှိလာမယ့် Oppo R19 စမတ်ဖုန်းမှာ စတင်အသုံးပြုထားနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ Helio P90 SoC အသုံးပြု စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဟာ AnTuTu ဝက်ဆိုက်ပေါ်ကို ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ ဘာဖုန်းအမျိူးအစားလဲဆိုတာ အတိအကျမသိရသေးပေမယ့် AnTuTu ရမှတ်တွေအရဆိုရင်တော့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 710 SoC ကို ယှဉ်ဖိုက်နိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ သေချာတာကတော့ Huawei ရဲ့ Kirin 710 SoC ထက် အများကြီးသာပါတယ်။
Helio P90 SoC ကို အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းဟာ Resolution 1080 x 2160 pixels ရှိတဲ့ Full HD+ Display နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ RAM အနေနဲ့ 6GB ပါဝင်တာ တွေ့ရပြီး Memory Storage ကိုတော့ 128GB ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ စမတ်ဖုန်းရဲ့ စုစုပေါင်းရမှတ်က ၁၆၂,၈၆၁ အထိရရှိထားတဲ့အတွက် Snapdragon 710 ရဲ့ ရမှတ်တွေနဲ့ မတိမ်းမယိမ်းပဲ ကွာခြားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
Helio P90 ဟာ 12nm Architecture နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ Octa-core Processor ဖြစ်ပါတယ်။ 2.2GHz ရှိတဲ့ Cortex A75 Cores ၂လုံးနဲ့ 2.0GHz ရှိတဲ့ Cortex A55 Cores ၆လုံးကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ A.I. စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း အရင်မျိူးဆက် Helio P60 နဲ့ Helio P70 တို့ထက် ၄ဆ အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း MediaTek က ပြောကြားထားပါတယ်။
Snapdragon 710 SoC ရဲ့ အကောငျးဆုံး ပွိုငျဘကျ MediaTek Helio P90
ထိုငျဝမျနိုငျငံအခွစေိုကျ နညျးပညာကုမ်ပဏီကွီး တဈခုဖွဈတဲ့ MediaTek အနနေဲ့ Helio P90 SoC ကို လှနျခဲ့တဲ့ ၂ပတျလောကျတုနျးက တရားဝငျမိတျဆကျပေးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါ Helio P90 SoC ကို ၂၀၁၉ခုနှဈ Q1 ( 1 Jan – 31 March) မှာ ထှကျရှိလာမယျ့ Oppo R19 စမတျဖုနျးမှာ စတငျအသုံးပွုထားနိုငျကွောငျး ကြှမျးကငျြပညာရှငျမြားက ခနျ့မှနျးပွောဆိုထားကွပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ Helio P90 SoC အသုံးပွု စမတျဖုနျးတဈလုံးဟာ AnTuTu ဝကျဆိုကျပျေါကို ရောကျရှိလာကွောငျး သတငျးမြား ထှကျပျေါလာပါတယျ။ ဘာဖုနျးအမြိူးအစားလဲဆိုတာ အတိအကမြသိရသေးပမေယျ့ AnTuTu ရမှတျတှအေရဆိုရငျတော့ Qualcomm ရဲ့ Snapdragon 710 SoC ကို ယှဥျဖိုကျနိုငျတဲ့ အနအေထားမှာ ရှိပါတယျ။ သခြောတာကတော့ Huawei ရဲ့ Kirin 710 SoC ထကျ အမြားကွီးသာပါတယျ။
Helio P90 SoC ကို အသုံးပွုထားတဲ့ စမတျဖုနျးဟာ Resolution 1080 x 2160 pixels ရှိတဲ့ Full HD+ Display နဲ့ဖွဈပါတယျ။ RAM အနနေဲ့ 6GB ပါဝငျတာ တှရေ့ပွီး Memory Storage ကိုတော့ 128GB ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။ အဆိုပါ စမတျဖုနျးရဲ့ စုစုပေါငျးရမှတျက ၁၆၂,၈၆၁ အထိရရှိထားတဲ့အတှကျ Snapdragon 710 ရဲ့ ရမှတျတှနေဲ့ မတိမျးမယိမျးပဲ ကှာခွားနတော တှရေ့ပါတယျ။
Helio P90 ဟာ 12nm Architecture နဲ့တညျဆောကျထားတဲ့ Octa-core Processor ဖွဈပါတယျ။ 2.2GHz ရှိတဲ့ Cortex A75 Cores ၂လုံးနဲ့ 2.0GHz ရှိတဲ့ Cortex A55 Cores ၆လုံးကို ပေါငျးစပျဖှဲ့စညျးထားတာပါ။ A.I. စှမျးဆောငျရညျအပိုငျးမှာဆိုရငျလညျး အရငျမြိူးဆကျ Helio P60 နဲ့ Helio P70 တို့ထကျ ၄ဆ အထိ ပိုမိုကောငျးမှနျလာမှာ ဖွဈကွောငျး MediaTek က ပွောကွားထားပါတယျ။
MyTech Myanmar2018-12-28T11:51:52+06:30December 28th, 2018|MediaTek, Mobile Phones, News, Qualcomm, Technology|